Qatar ( ), waa dal ku yaalla galbeedka Aasiya , Xudduudda dhul ee keliya waxay la leedahay Boqortooyada Sacuudi Carabiya ee koonfurta, iyadoo inta kale ee dhulkeeda ku xeeran Gacanka Beershiya . Gacanka Baxreyn , oo ah marinka Gacanka Beershiya, wuxuu kala saaraa Qatar iyo Baxrayn oo u dhow . Horraantii 2017, tirada guud ee dadka Qatar waxay ahayd 2.6 milyan: 313,000 oo muwaadiniin Qatar ah iyo 2.3 milyan qurbajoog ah . Islaamku waa diinta rasmiga ah ee Qatar.  Marka la eego dakhliga , waddanku wuxuu leeyahay GDP -da saddexaad ee ugu sarreeya (PPP) qofkiiba adduunka,  iyo kan lixaad ee ugu sarreeya GNI qofkiiba (Atlas method) .  QM waxay Qatar ku tilmaamtay inay tahay wadan horumarka biniaadamka aad u sarreeya, iyadoo ku jirta kaalinta saddexaad ee HDI ee dunida Carabta ka dib imaaraatka s iyo Sucuudiga .
Waddanmaha deggan Qatar[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qatar&oldid=227986"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Jannaayo 2022, marka ee eheed 13:48.